Chekutanga chaicho mufananidzo wenyaya yeiyo iPhone 7 | IPhone nhau
Kwemazuva ano ini ndainzwa kuti iyo "idonha", inogara iri mumakotesheni nekuti zvese izvi zvinogona kugadzirirwa, hazvichamire kusvikira zuva rekuratidzwa kweiyo nyowani iPhone. Isu tatoona schematics uye zvinopa izvo zvinoita kunge zviri chaizvo kubva kuiyo iPhone 7 uye iPhone 7 Plus / Pro, isu takaona kamera module, takaona backlit pani, asi isu hatisati taona chero mapikicha enyaya chaiyo. Kana zvirinani kusvika nhasi, kubvira NoWhereElse akatumira mufananidzo wechingave chiri yekutanga chaiyo pikicha yeiyo iPhone 7 kesi.
Kune avo vasingazive, NoWhereElse inyanzvi yechiFrench yakatoburitsa zvinhu zvakawanda zveiyo iPhone nezvimwe zvishandiso munguva yakapfuura. Anowanzozviita pane rake bhurogu, hongu, asi ivo zvakare titter yakawanda yeaya anodonha kubva kuTwitter account OnLeaks, iyo ingangodaro inonyanya kuzivikanwa munhoroondo dzake mbiri, uye Stagueve. Steve, mupepeti ari kubvunzwa, pamusoro pekuita kudonha kuzhinji, anotarisa zvese zvese uye ndiye anoti izvo, mumaonero ake, ichi ndicho chifananidzo chekutanga cheiyo iPhone 7.
Chekutanga chaicho mufananidzo weiyo iPhone 7
Sezvauri kuona, iwo mufananidzo uri pamusoro une zvese zvakange zvichitaurwa kusvika nhasi nezve iyo 4.7-inch modhi: aperture yekamera ine hombe lens uye zvimwe kukona, kusavapo kweSmart Connector uye akagadzirisa zvakare mabhendi eantena. Iyo kamera bump yakagadzirwazve uye inoita kunge iri nani kwazvo kupfuura iyo iPhone 6 / 6s. Chokwadi iwe unenge uchitarisa kune maviri maficha: kuti iyo flash inotaridzika nhema uye kuti iyo kamera yekamera inopenya. Izvo zvinogona kutsanangurwa zviri nyore: iyo flash haina kuiswa uye iyo lens yesafiri iri.
Mufananidzo weiyi iPhone 7 kesi yaonekwa, senguva dzose, mu Weibo. Iyo Weibo account iyo yakaburitsa yakafambidzana nemufananidzo nemamwe maviri, imwe kumberi uye imwe kumashure, kwechikamu chematunhu einotevera apple apple. Zvese zvinoita sekunge zvinoratidza kuti, chokwadi, isu tiri kutarisa iyo yekutanga chaiyo mufananidzo weiyo iPhone 7. Unoiona sei iwe?
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone Zviteshi » iPhone 7 » Uyu unogona kuve wekutanga mufananidzo weiyo iPhone 7 kesi
Foni inotyisa kana ichienzaniswa neye galaxy s7 uye huawei p9 kubva pakuipa kusvika pakuipa
Izvo zvakashata kwazvo uye zvinoita sekunge kutevedzera kweChinese kwavanotengesa online
Pindura KuKushata Kwazvo
Apple zvirinani kusave izvo ,,, nekuti zvakashata segehena!
TaiG inoti haizoregi kushanda kuti itange imwe jailbreak